Anigu waxaan ahay wiil 14 sanno jir ah. Haddii aan sameeyo wax khalad ah, aabahayga wuu i garaacayaa. Anigu aadbaan u ixtiraamaa aabahayga. Si kastaba, Waxaan doonayaa in uu arintaasi joojiyo. Sideen ugu sheegaa?
Du bist hier: Startseite / Anigu waxaan ahay wiil 14 sanno jir ah. Haddii aan sameeyo wax khalad ah,...
Marka hore waxaan jecelnahay in aynu arin kuu sheegno:
Gudaha dalka Jarmalka waa ka mamnuuc in carruurta la garaaco.
Sharcigu wuxuu dhigayaa:
Carruurtu waxay xaq u leeyihiin in la koriyo ayaga oo aan dhibaato loo gaysanin.
Waalidiintu marnaba si ula kac ah uma dhaawacayaan carruurtooda.
Waa in aysan u dhaawicin jir ahaan.
Iyo in aysan u dhaawicin nafsi ahaan.
Garaacu wuxuu sababayaa dhaawac jirka ku dhaca iyo mid nafsi ah.
Midaasi waa adiga xaqa aad ku leedahay ka ilmo ahaan waalidiintaada.
Sharcigaan wuxuu u jiraa si loo hubsado in ay carruurtu koraan ayaga oo caafimaad qabba.
Waxaad dhihi kartaan sidan.
Haddii aadan awoodin in aad la hadashid aabahaaga adiga naftaada waxaa jira xarumo dadka caawiya.
Gudaha magaalada Munich waxaad ka heli kartaa xarun caawimaad u dhow gurigaaga: http://www.muenchen.de/dienstleistungsfinder/muenchen/1053/
Carruurta iyo dhallinyarada ku nool guud ahaan dalka Jarmalka waxay wici karaan Nummer gegen Kummer: 116111
Waxaad si bilaash ah uga wici kartaa lambarkan teleefoonkaaga gacanta.
Waxaa jira dad meesha jooga laga bilaabo 2 duhurnimo ilaa 8 habbeenimo kuwaas oo aad la hadli karto.
https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png 0 0 editorialteam https://refu-tips.de/wp-content/uploads/AMYNA_logo_transparent_klein.png editorialteam2017-03-30 13:42:362017-03-30 13:42:36Anigu waxaan ahay wiil 14 sanno jir ah. Haddii aan sameeyo wax khalad ah, aabahayga wuu i garaacayaa. Anigu aadbaan u ixtiraamaa aabahayga. Si kastaba, Waxaan doonayaa in uu arintaasi joojiyo. Sideen ugu sheegaa?